ဆော်ဒီကို ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုက မတည်ငြိမ်တဲ့ ဒေသတွင်း အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေ
ဆော်ဒီကို ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုက မတည်ငြိမ်တဲ့ ဒေသ...
18 ก.ย. 2562 - 22:17 น.
ဟူသီတွေက သူတို့တိုက်တာလို့ ပြောတယ်၊ အမေရိကန်ကတော့ ဒါ အီရန်ရဲ့ လက်ချက်လို့ ဆိုတယ်။ အီရန်ကတော့ သူတို့နဲ့ လုံးဝ မဆိုင်ပါဘူးလို့ ပြောနေပါတယ်။
ဆော်ဒီအာရေဗျရဲ့ အရေးပါလှတဲ့ ရေနံတွင်းတွေကို ဒရုန်းလေယာဉ်တွေ တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အခုလို သူလုပ်တာ ငါလုပ်တာ စကားစစ်ထိုးမှုတွေ ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုက ဆော်ဒီအာရေဗျရဲ့ ရေနံတွင်းတွေဟာ တိုက်ခိုက်ခံရနိုင်တဲ့ အန္တရာယ် လွယ်လွယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာ ပြလိုက်သလိုပါပဲ။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးရဲ့ မောင်းနှင်အားတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ဆော်ဒီအာရေဗျရဲ့ ရေနံတွင်းတွေ ထိခိုက်ခံလိုက်ရတာဟာ တကမ္ဘာလုံးကို အချက်ပြလိုက်သလိုလည်း ဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။
ဆော်ဒီအာရေဗျဟာ ယီမင်နိုင်ငံထဲက ဟူသီသူပုန်တွေကို လေကြောင်းက တိုက်နေတာ ကြာပါပြီ။ အဲဒီ တိုက်ခိုက်မှုကို အမေရိကန်တွေက ထောက်ခံပေးနေပြီး ဆော်ဒီတိုက်လေယာဉ်တွေ ဆက်ပျံသန်းနိုင်အောင်ဆိုတာကလည်း အနောက်နိုင်ငံက လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေး ကုမ္ပဏီတွေက အကူအညီပေးနေခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ သူတို့ရဲ့ ရန်သူတွေက သူတို့ရဲ့ ဗျူဟာမြောက် နေရာတွေကို လျှပ်တပြက် ထိုးနှက်နိုင်စွမ်း ရှိတယ်ဆိုတာကို ပြလိုက်တာပါ။
ဒီတိုက်ခိုက်မှုကနေ ဟူသီသူပုန်တွေကို ထောက်ခံအားပေးနေတဲ့ အီရန်ကလည်း ဟူသီတွေကို ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာအထိ နည်းပညာအကူအညီတွေ ပေးနေသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ထပ်ပေါ်လာပါတယ်။ ပင်လယ်ကွေ့ ဒေသအတွင်း သူ့ဘက် ငါ့ဘက်နဲ့ ပြိုင်ဆိုင် ရန်လို တင်းမာမှုတွေ များနေချိန် အခုဖြစ်ရပ်က ပိုတောင် စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေတစ်ခုဆီ တွန်းပို့လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဘက်မှာတော့လည်း အခု ဖြစ်ရပ်က အမေရိကန်သမ္မတ ထရမ့်အစိုးရရဲ့ အီရန်အပေါ် အပြင်းထန်ဆုံး ဖိအားပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ မူဝါဒရဲ့ ချို့ယွင်းချက်တွေကို ပြလိုက်တာလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အခုလို အပြန်အလှန် စွပ်စွဲကြ အပြစ်ဖို့ကြတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေအကြားမှာ မသိနိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေလည်း အတော်များများ ရှိနေပါသေးတယ်။ အရင်ကလည်း ဆော်ဒီက ပစ်မှတ်တွေကို ဟူသီတွေက ဒရုန်းနဲ့ရော ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပါ တိုက်ခိုက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတုန်းက ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ သိပ်ပြီး ထိရောက်ခဲ့တာ မရှိပါဘူး။
အခုနောက်ဆုံး ရေနံစက်ရုံတွေကို တိုက်ခိုက်မှုကတော့ ဒရုန်းတွေ သွားရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ အကွာအဝေးရော၊ ပစ်မှတ်တွေကို ထိထိရောက်ရောက် တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းတွေကရော စစ်ပွဲရဲ့ အနေအထားကို ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းသွားစေခဲ့ပါတယ်။
ဆိုတော့ အခု တိုက်ခိုက်မှုဟာ တကယ်ပဲ ဒရုန်းယာဉ်တွေနဲ့ တိုက်တာလား၊ ဒုံးကျည်တွေ ပစ်လွတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလား။ တကယ်လို့သာ ဒုံးကျည်တွေနဲ့ တိုက်တာဆိုရင် ဆော်ဒီအာရေဗျရဲ့ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး စနစ်တွေက အချက်မပေးခဲ့ဘူးလား။ ဒီ ဒုံးကျည်တွေကို ဟူသီတွေ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နေရာတစ်ခုက ပစ်လွှတ်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားနေရာ တစ်ခုခုကလား။ အီရတ်မှာ ရှိနေတဲ့ အီရန်လိုလားတဲ့ အုပ်စု တစ်ခုခုက ပစ်တာလား၊ ဒါမှ မဟုတ် အီရန်ကိုယ်တိုင်က တိုက်တာလား။
အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး မိုက်ပွန်ပေယိုကတော့ အီရန်ကိုပဲ အလျင်အမြန် အပြစ်တင် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို အပြစ်တင်မှုက အချက်အလက်အထောက်အထားတွေ အများကြီး မရသေးခင်မှာ လုပ်လိုက်တာပါ။ ရှိနေရင်တောင်မှ တခြားလူတွေက စိစစ်အကဲဖြတ်နိုင်အောင် ထုတ်မပြ ထုတ်မပြောခဲ့ပါဘူး။
မိုက်ပွန်ပေယိုကတော့ အီရန်အနေနဲ့ တာဝန်ယူရအောင် အမေရိကန်နဲ့ မဟာမိတ်တွေက လုပ်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နောက် နာရီအတော်ကြာတဲ့ အချိန်မှာတော့ အမေရိကန် သတင်းရင်းမြစ်တချို့က အခု တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် ဆော်ဒီအာရေဗျမှာ နေရာ ၁၇ နေရာကို ထိမှန်ခဲ့ပြီး အဲဒီထိမှန်ခံရတဲ့နေရာတွေကို ကြည့်ရင် တိုက်ခိုက်မှုဟာ မြောက်ပိုင်းနဲ့ အနောက်မြောက်ပိုင်းက လာတယ်လို့ ယူဆနိုင်စရာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင် တောင်ပိုင်းမှာ ရှိတဲ့ ယီမင်ထက် အီရန် ဒါမှမဟုတ် အီရတ်က လာတာ ပိုပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။
အမေရိကန်ကတော့ နောက်ထပ် စိစစ်မှုတွေ လုပ်နေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပစ်မှတ်ကို မရောက်ခဲ့တဲ့ ဒရုန်းတွေနဲ့ ဒုံးကျည်တွေကိုလည်း လေ့လာဆန်းစစ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အီရန်ဟာ ဟူသီ သူပုန်တွေနဲ့ နီးစပ်ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်ထားတာမို့ ဟူသီတွေရဲ့ စစ်ရေးစွမ်းရည်ကို မြင့်တက်နေအောင် အီရန်ကပဲ အကူအညီပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဟူသီတွေက လက်နက်တပ် ဒရုန်းယာဉ်တွေနဲ့ ဖြစ်စေ၊ ဒုံးကျည်တွေနဲ့ ဖြစ်စေ အခုလို တာဝေးရောက်အောင် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း အများကြီးတော့ သံသယဖြစ်လောက်စရာ မရှိပါဘူး။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တုန်းက ကုလသမဂ္ဂ ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာ တစ်ခုမှာ ဟူသီတွေသုံးတဲ့ Qasef-1 UAV ဒရုန်းယာဉ်နဲ့ အီရန်တို့ရဲ့ Ababil-T ယာဉ်နှစ်ခုတို့ အတော်ကြီး ဆင်တူနေတာကို ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီထက် ပိုကျယ်ပြန့်တဲ့ အစီရင်ခံစာ တစ်ခုမှာတော့ အီရန်ဟာ ယီမင်အပေါ် လက်နက်ထောက်ပံ့မှု ပိတ်ပင်ထားတဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အရေးယူကန့်သတ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ပြီး ဟူသီသူပုန်တွေကို လက်နက်အမျိုးမျိုးနဲ့ လက်နက် စနစ်တွေကို ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်ဆိုတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၁၇ မတ်လတုန်းကလည်း လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပဋိပက္ခများအတွင်း လက်နက်အသုံးပြုမှု သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့ လေ့လာချက် တစ်ခုမှာ ဒီအတိုင်းပဲ ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က အီရန်တွေက လက်နက်တပ် ဒရုန်းယာဉ်တွေ အသုံးပြုမှု တခြားနိင်ငံတွေကို ထောက်ပံ့မှုတွေကို အထူးပြုလေ့လာခဲ့ကြတာပါ။
ဒါပေမယ့် Qasef-1/Ababil-T နှစ်ခုစလုံးရဲ့ ရောက်နိုင်တဲ့ အကွာအဝေးက ကီလိုမီတာ ၁၀၀ က ၁၅၀ အတွင်းပဲ ရှိပါတယ်။ ယီမင်နိုင်ငံရဲ့ နယ်စပ်ကနေ အခု ထိခဲ့တဲ့ ဆော်ဒီ ရေနံတွင်းတွေထဲက အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ခူရာအီရေနံတွင်းက ကီလိုမီတာ ၇၇၀ လောက် ဝေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ ဒရုန်းယာဉ်နဲ့တိုက်ခဲ့တာ ဆိုရင် ဒီ ယာဉ်ဟာ ပုံစံသစ်ထုတ်ထားတဲ့ ယာဉ်မျိုးဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလောက် အကွာအဝေးကို သွားနိုင်ပြီး၊ ပိုပြီးလည်း ပစ်မှတ်ကို ထိနိုင်လောက်အောင် ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ စိတ်ချရတဲ့ အရည်အသွေးထိ တိုးတက်ထုတ်လုပ်ထားသူ ဖြစ်ရပါမယ်။
အီရန်နဲ့ ဟူသီသူပုန်တွေမှာ တာဝေးပစ်လက်နက်တွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလက်နက်တွေကို ယီမင်ပြည်တွင်းစစ်မှာ ထုတ်သုံးခဲ့တဲ့ အထောက်အထားကတော့ သိပ်မတွေ့ရသေးပါဘူး။ အီရတ်ကနေ ခရုဇ်ဒုံးပျံတစ်မျိုးနဲ့ လှမ်းပစ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတိအကျ ပြောနိုင်ဖို့ကတော့ နောက်ထပ် အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့ အထောက်အထားတွေ ရရှိဖို့လိုပါလိမ့်ဦးမယ်။
ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းပြောရရင်လည်း အဲဒီလို အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေက အရေးမကြီးတော့ပါဘူး။ သံတမန်ရေးအပိုင်း ပြောရရင်ကို ထိခိုက်မှုတွေက ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ အမေရိကန်နဲ့ ဆော်ဒီအာရေဗျတို့ဟာ အီရန်နဲ့ ညှိမရနိုင်တဲ့ ရန်သူတွေပါ။ ထရမ့်အစိုးရကတော့ အခုနောက်ဆုံး တင်းမာမှုတွေမှာ အီရန်ဘက်က အလွန်တွေပဲလို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးသားဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပင်လယ်ကွေ့ထဲမှာ သင်္ဘောတွေကို မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တာ အီရန်လက်ချက်လို့ သူတို့က စွပ်စွဲ ပစ်တင်ထားပါတယ်။ အီရန်နိုင်ငံက ရေနံတွေတင်လာတဲ့ သင်္ဘောတစ်စင်းကို ဂျီဘရော်လ်တာကမ်းလွန်မှာ ဗြိတိသျှစစ်သင်္ဘောကဖမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ အီရန်ကလည်း ဗြိတိန်အလံတင်လာတဲ့ ရေနံတင်သင်္ဘောကို ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။
ထရမ့်အစိုးရဘက်က အမြင်အရတော့ ဟူသီတွေက ဆော်ဒီအာရေဗျရေနံတွင်းတွေကို တိုက်ခိုက်လာခဲ့တဲ့ ဗျူဟာမြောက် စစ်ဆင်ရေးမှာ အီရန်ရဲ့ လက်စလက်နတွေ အများကြီး ပါနေတယ်ဆိုတာ ပိုင်းဖြတ်လက်ခံထားပြီးသား ဖြစ်နေပါတယ်။
ရေနံတွင်းတွေ တိုက်ခိုက်ခံရအပြီးမှာ ဆော်ဒီအာရေဗျက ရေနံထုတ်လုပ်မှုတွေ မပြတ်သွားအောင် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
မေးစရာက အမေရိကန်တွေ ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတာပါ၊ ဘာလုပ်မှာလဲ ဆိုတာထက် ဘာလုပ်နိုင်မှာလဲ ဆိုတာလည်း မေးရမယ်ထင်ပါတယ်။ အဖြေကတော့ ဘာမှ အများကြီး တတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ အမေရိကန်ဟာ အခု စစ်ပွဲမှာ ဆော်ဒီအာရေဗျဘက်က ခိုင်ခိုင်ကြီး ရပ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆော်ဒီအာရေဗျက ယီမင်ကို လေကြောင်းက ဗုံးကြဲနေတာကို အမေရိကန် လွှတ်တော်အမတ်တွေ ကြားမှာ တော်တော်လေး သဘောမကျ ဖြစ်နေတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဆင်းရဲတွင်းထဲ နစ်နေပြီးသားနိုင်ငံတစ်ခုက ပြည်သူတွေအတွက် စစ်ဘေးကပ်ဆိုးကြီးတစ်ခု နောက်ထပ်ဖြစ်စေတယ်လို့ သူတို့က ယူဆကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခု ရေနံတွင်းတွေတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်ချက်ရှိပါတယ်။ ထရမ့်အစိုးရက ဆော်ဒီကို အပြည့်အဝထောက်ခံထားပြီး အီရန်ကို အပြင်းထန်ဆုံး ဖိအားပေးမယ်လို့ ပြောနေပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ အမေရိကန်တွေက အီရန်ကို အမျိုးမျိုးသော သတင်းစကားတွေပါးပေးနေသလိုမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။
သမ္မတထရမ့်ဟာ လာမယ့် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွညီလာခံမှာ တက်ရောက်လာမယ့် အီရန်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ လိုလားနေသလိုပဲ အီရန်မှာ အစိုးရပြောင်းလဲရေးလိုလားပြီး ဆော်သြတိုက်တွန်းနေခဲ့ဖူးတဲ့ သူ့ရဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေး အကြံပေး ဂျွန်ဘိုလ်တန်ကိုလည်း မကြာသေးခင်ကပဲ ထုတ်ပယ်ထားပါတယ်။
အီရန်နဲ့ သူ့ မဟာမိတ် ဟူသီသူပုန်တွေကတော့ အားနည်းသူနဲ့ အားကြီးသူ စစ်ပွဲမှာ အားနည်းသူတွေသုံးတဲ့ စစ်ရေးနည်း မဟာဗျူဟာမျိုးစုံကို အသုံးချနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ရုရှားတွေ သုံးခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ ငြင်းဆိုတဲ့နည်း၊ ကြားခံစစ်အုပ်စု စစ်မြေပြင်ကို အသုံးချတဲ့နည်း၊ ဆိုင်ဘာစစ်ပွဲနဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ ဖြန့်ချိတိုက်ခိုက်တဲ့ စစ်ပွဲတွေကို တိုက်နေပါတယ်။
သမ္မတထရမ့်ဟာ စစ်ခေါ်သံတွေ ပြောတတ်သူ၊ ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ မှန်းရခက်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပေမယ့် အမေရိကန်စစ်တပ်ကို စစ်မြေပြင်တွေကနေ ပြန်ထုတ်ချင်သူ၊ နောက်ထပ် စစ်ပွဲ အသစ်တွေ နွှဲဖို့ စိတ်မပါသူမှန်းလည်း အီရန်ဘက်က သိလို့နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ အီရန်ဘက်ကလည်း သူတို့နည်းသူတို့ဟန်နဲ့ အမေရိကန်ကို ဖိအားအပြင်းဆုံးပြန်ပေးနေတဲ့ သဘောတွေ့ရပါတယ်။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ဘက်ဘက်က တွက်ဆမှုမှားယွင်းပြီး တစ်ခုခု လုပ်လိုက်မိတာနဲ့ စစ်ပွဲကြီး တစ်ခု ထ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။
အဲဒီ အလားအလာကိုတော့ ဘယ်သူကမှ လိုလိုလားလား ရှိကြမှာ မဟုတ်တာလည်း သေချာပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဆော်ဒီကို ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုက မတည်ငြိမ်တဲ့ ဒေသတွင်း အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေ